Myanmar OA6: အချမ်းသာဆုံး မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 3:01 AM
ကိုပွတ်ကြီး .. တော်တော်နှံ့စပ်တာပဲ။ အသိပညာတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
အဲဒီလူတွေဆီက အခွန် တယောက်ကို ၁၀% စီ ကောက်ပြီး တခုခု လုပ်ရရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ်။ :D
မောင်ပွတ်.. နင့်စာရင်းက မပြည့်စုံဘူးထင်တယ်နော်။ အချမ်းသာဆုံးတစ်ယောက်လိုနေလားလို့.. :P
i want to know "Sr Gen Than Shwe" in ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သက်ရှိထင်ရှား ဘုရင်မင်းမြတ် list.
ဒီသတင်းလေးကို ကျတော်တို့ဆီက ဘုရင်ရူးကြီးများမြင်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိ. နာ အချမ်းသာဆုံး နာ အချမ်းသာဆုံး ဆိုပြီး ထအော်နေမလား မသိ..
မောင်ပွတ်ရေ .. ထိုင်းဘုရင်က အာရပ် ဘုရင်တွေထက်တောင် ချမ်းသာတယ် မထင်မိခဲ့ဖူး ။ အခု သူက နံပတ် (၁) ဆိုတော့ အံ့သြသွားတယ် ။ အတော်ချမ်းသာတာပဲနော် ။